Home QORMOOYIN Farogelinta doorasho deegaanka Berbera
Doorashooyinkii dalka ka dhacay xukuumadu may faragelin hase yeeshe waxa muuqata inay dowladu si culus u faragelisay degmada Berbera iyadoo u dirtay waziiro iyo ciidan RRU ah iyadoo degmada uu joogo ciidankii booliska.
Waxa la yaab leh waxay dawladu Berbera oo keliya culayska u saartay? Miyaanay okay inay xumaynayso wanaagii doorashadii dhacday!? Waa maxay se xiisaha ay u leeday waziirada kasoo jeeda bariga Burco??ee taageeray Cidin!
Waxa xusid mudan in maamulkii hore ee Siilaanyo inuu doorashadii hore ee Degaanka usoo diray waziiro iyo ciidan rabay inay ku shubtaan doorashada, hase yeeshe kumay guulaysanin oo ceeb ayay ka qaadeen, maantana waa tii oo kale oo aan biyo is marin ee xukuumada Kulmiye haka waantowdo xadgudubka iyo xeerjebinta ay ku hayso reer Berbera waayo nina dan uma aha in rebshedi ka dhacdo magaalada.
WQ Cabdi Ibraahin
Previous articleBerbera waxaa ka dhacay doorasho xor ah
Next articleGolaha Deegaanka Sheekh oo doortay Maayir iyo xigeen